U-Lola Omotayo Ubala amava eCoronavirus-Iindaba zaseNigeria kunye neGl
LU-ola Omotayo uthetha ngamava kunye ne-coronavirus, umlingani kaJeffery Epstein obanjiweyo, uMikel Arteta onomdla kakhulu ukuba isivumelwano se-Aubameyang siza kuvuselelwa. Hlala wazi ngeRave News Digest yethu eshwankathela iindaba ezihlanu ezishushu zehlabathi ekufuneka uzifumanele, zikongela ixesha namandla. Yithathele ingqalelo njengengxelo yakho yemihla ngemihla.
1. U-Lola Omotayo uthetha ngamava akhe e-coronavirus, wathi waya esihogweni
UPeter Okoye's nomfazi Lola Omotayo Uphumile ukuba azokuthetha ngamava akhe ngale nto yoyikayo. Kwividiyo ekwabelwana ngayo ngephepha lakhe le-Instagram ngoLwesithathu, nge-1 kaJulayi ka-2020, uLola Omotayo wathi wabandezeleka kwaye waqaqanjelwa yintlungu engathethekiyo xa wayequbisana ne-coronavirus.
"Andinqweneli olu lutshaba lwam olubi kwaye kufuneka ndazise wonke umntu ukuba i-COVID yinyani. Ndibandezelekile, ndisezintlungwini ezininzi, ndibukele usapho lwam luza kuyo, kwaye andinqweneli oku ngokuchasene notshaba lwam olubi, " uthe.
Uqhubekile nokufaka i-video ngeposti apho wabongoza abantu baseNigeria ukuba balumke njengoko intsholongwane iyinyani.
2. IGhana: Umphathi weKhomishini yamaHlathi uSir John ufile
Mva Sir John
Igosa elilawulayo kwiKomishini yamaHlathi, uMnu. Kwdala Owusu Afriyie, eyaziwa ngokuba yi-Sir John ifile. Usweleke kwisibhedlele saseKorle Bu sokufundisa ngoLwesithathu, nge-1 kaJulayi, 2020, emva kokugula.
Umnumzana John, oneminyaka engama-63, usandula ukulahleka ngudade wabo kwaye waya kwenza imisitho yeveki enye kwidolophu yakhe, uSakora Wonoo kufutshane neKumawu kuMmandla weAshanti. Xa wabuyela e-Accra, wagula wagula kwaye wamkelwa kwisibhedlele saseKorle Bu sokufundisa. Uxilongelwe ukuba unaso isifo se-coronavirus (COVID-19) kwaye wasweleka ngoLwesithathu, nge-1 kaJulayi, 2020.
Uvelwano lwethu luyaphuma lusiya kusapho nakwabo baphumelele kakuhle.
3. Ityala lokubulala lika Tshegofatso Pule lihlehlisiwe ngenxa yamatyala e-COVID-19
Phezulu Tshegofatso Pule
IGunya lezoTshutshiso leSizwe (i-NPA) lithe onke amatyala ebekumele ukuba aviwe kwinkundla kamantyi eRoodepoort, avele ngoLwesine, nge-9 kaJulayi ngo-2020. Kubekho ukulibaziseka kwetyala elalibandakanya lo mntu utyholwa ngokubulala iminyaka engama-29. UTshegofatso Pule mdala -mthethe ngoku uhlehlisiwe ngenxa yamatyala afanelekileyo e-COVID-19.
NgokweGunya leSizwe lezoTshutshiso (i-NPA), amapolisa amabini kwiNkundla kaMantyi eRoodepoort afunyenwe enetyala. Iminyaka engama-31 ubudala UMzikayise Malephane watyholwa ngokubulala ngogonyamelo uPule ngokubuya ngoJuni. Umzimba wenkosikazi ekhulelwe kakhulu wafunyanwa uxhonywe emthini eRoodepoort.
4. Imfihlo kaJeffrey Epstein, u-Ghislaine Maxwell, obanjwe yi-FBI
UGhislaine MaxwellUmhlobo waseBritane onobuhlobo kunye nomhlobo osondeleyo womhlaziyi wezemali UJeffrey Epstein, wabanjwa e-United States ngolwesine ngezityholo zokuncedisa ukuthoba amantombazana angaphantsi kweminyaka kwaye axhatshazwa ngokwesondo ngu-Epstein.
UMaxwell, owayehlala iminyaka kunye no-Epstein, wayegcinwe eziseleni ngentsimbi ye-8: 30 e-New Hampshire, utshilo okhulumela i-FBI UMarty Feely. UMaxwell, 58, utyholwa ngamanenekazi amaninzi ngokuwaqokelela ukuba anike imessage ka-Epstein, ngexesha apho bacinezelwa ukuba babelane ngesondo. Ezo zityholo, kude kube ngoku, azizange ziphumele kwizityholo zolwaphulo-mthetho.
5. UPierre-Emerick Aubameyang: Umphathi weArsenal uMikel Arteta unethemba lokuba ikhontrakthi yomdlali ophambili iya kuhlaziywa
UMikel Arteta Utsho ephilile Pierre-Emerick Aubameyang Uya kusayina isivumelwano esitsha emva kokuba ngumdlali okhawulezayo weArsenal ukuba enze i-50 ye-Premier League iinjongo.
IGabon iye phambili i-Aubameyang, i-31, yafumana amanqaku kabini xa amaGuners anyuka ukuya kwisixhenxe ngokuphumelela i-4-0 kwiNorwich. Ikhontrakthi yakhe yangoku iphelelwa lixesha ekupheleni kwe-2020 ukuya kwi-21.
Uhlobo Rave Julayi 2, 2020